ESI HỌRỌ OTU NHAZI MAKA KỌMPUTA - NHAZI - 2019
Ịhọrọ nhazi maka kọmputa
Onye ozi ozi telivishọn a ma ama, onye mepụtara netwọk mmekọrịta ọha na eze VKontakte Pavel Durov, na-aghọwanye onye na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Ngwa a dị na mbipute desktọọpụ na Windows na MacOS, nakwa na ngwaọrụ mkpanaaka na-agba ọsọ iOS na Android. Naanị ịwụnye Telegram na smartphones na robot green na a ga-atụle n'isiokwu a.
Hụkwa: Otu esi etinye Telegram na kọmpụta
Telegram ntinye na gam akporo
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ngwa ọ bụla na ngwaọrụ gam akporo nwere ike ịbịnye na ọtụtụ ụzọ - ọrụ na, ya mere, ikwu okwu, gburugburu ebe obibi. Anyị ga-agwa onye nke ọ bụla n'ime nkọwa ndị dị n'okpuru ebe a.
Usoro 1: Play Market na ngwaọrụ gị
Ọtụtụ smartphones na mbadamba na-arụ ọrụ na usoro ọrụ arụmọrụ mbụ nwere Market Market na ngwá agha ha. Nke a bụ ụlọ ahịa ụlọ ọrụ sitere n'aka Google, site na nke ịchọrọ, nbudata, wụnye ma mee ka ngwa ngwa. Ịwụnye Telegram sitere na Google Play na ngwaọrụ dị otú a dị nnọọ mfe, isi ihe bụ ịrapara na algorithm na-esonụ:
Ụlọ ahịa Play Store site na ịpị ụzọ mkpirisi ya. Nke ikpeazụ a nwere ike ịchọta ma na isi ihuenyo na n'ime ngwa ngwa.
Kpatụ na igbe ọchụchọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ, tinye ebe ahụ "Telegram"wee pịa bọtịnụ nchọta ahụ gosipụtara na keyboard ahụ mebere.
Ihe mbụ si na ya pụta - nke a bụ onye ozi achọrọ. Ugbua ugbu a ọ ga-ekwe omume "Wụnye"site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịgụ nkọwa nke ngwa ahụ site na ịpị "Nkọwa", na mgbe ahụ ịmalite itinye ya.
Usoro nbudata nke Telegram ga-agwụ ngwa ngwa dị ka ọ malitere, mgbe ọ gwụchara, onye ozi ahụ ga-adị "Meghee".
Na windo ngwabata nke ngwa ahụ ga-ezute gị mgbe ịmalitere ya, pịa njikọ dị n'okpuru ebe a. "Nọgide na Russian".
Kwere na Telegram ga-enweta oku na SMS site na ịpị "OK"wee kwado nkwenye gị site na ịpị ugboro abụọ "Kwe ka".
Tinye nọmba ekwentị gị (nke ọhụrụ ma ọ bụ nke mbụ ejikọrọ na akaụntụ gị) ma pịa akara akara na akuku aka nri ma ọ bụ bọtịnụ bọtịnụ na keyboard ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Telegram ma eji ya na ngwaọrụ ọ bụla, ọkwa ahụ na koodu mmeghe ga-abịa kpọmkwem na ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị onye ozi ahụ na mbụ, a ga-eziga SMS na-agakarị na nọmba mkpado dị n'elu. Na nke ọ bụla n'ime nhọrọ, tinye koodu natara ma pịa akara ego ma ọ bụ "Tinye" na keyboard, ma ọ bụrụ na "natabata" nke koodu ahụ anaghị eme na-akpaghị aka.
Gụọ arịrịọ maka ịnweta kọntaktị gị (maka nkwurịta okwu ọ dị mkpa) wee pịa "Nọgidenụ n'ihu"na mgbe ahụ "Kwe ka" onye ozi na-enweta ya.
Ekele, Telegram maka gam akporo arụchaala nke ọma, hazie na njikere iji. Ị nwere ike ịmepụta ya site na ụzọ mkpirisi na ihuenyo ihuenyo ma ọ bụ site na ngwa ngwa.
Nke a bụ otu e si arụpụta ngwa ngwa nke Google Play Market site na ngwaọrụ mkpanaka gị. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọchụchọ na nbudata ya na-ewe oge karịa oge mbụ. Na-esote, tụlee nkọwa ọzọ nke usoro nhazi ọrụ nke ngwa a.
Usoro 2: Gwuo ahia na kọmputa
Ị nwere ike ịnweta Market Market bụghị naanị site na smartphone ma ọ bụ mbadamba na gam akporo, kamakwa site na kọmputa ọ bụla iji ihe nchọgharị na sistemụ weebụ nke ọrụ Google. Site na ya, ị nwere ike iwunye ngwa ahụ na ngwaọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị ya na aka gị ma ọ bụ ịnweta Intanet maka nkwarụ nwa oge.
Hụkwa: Otu esi abanye na akaụntụ Google gị
Rịba ama: Tupu ịga n'ihu na usoro a kọwara n'okpuru ebe a, ị ga-abanye na nchọgharị ahụ na akaụntụ Google ahụ a na-eji na ngwaọrụ mkpanaka gị dị ka isi.
Gaa n'ahịa Market Play Google
N'otu oge na peeji nke ụlọ ahịa ngwa ngwa, pịa bọtịnụ òké aka ekpe (LMB) na nchọta mmanya ma tinye aha onye ozi - Telegram. Pịa "Tinye" na keyboard ma ọ bụ bọtịnụ nchọta, nke gosipụtara iko iko. Biko mara na Telegram na-egosikarị na ngọngọ ahụ "Ị ga - achọ ya"site ebe ị ga-aga ozugbo na ibe ya na nkọwa ya.
Pịa LMB na ngwa mbụ na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ.
N'otu oge na peeji nke Telegram, ị nwere ike "Wụnye"Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ e gosipụtara na foto dị n'okpuru ebe a.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka na gam akporo jikọtara na akaụntụ Google gị, pịa njikọ ahụ "Ngwa ahụ jikọtara na ..." ma họrọ otu nke ịchọrọ ịwụnye onye ozi ahụ.
Kwenye akaụntụ gị site n'ịkọwa paswọọdụ maka ya, wee pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Na ụlọ ahịa ụlọ ahịa emelitere, ị nwere ike ịmara onwe gị na ikikere rịọrọ site na Telegram, jide n'aka na a họrọla ngwaọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ gbanwee ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Iji gaa n'ihu, pịa "Wụnye".
Gụọ ọkwa na ngwa ahụ ga-arụnyere na ngwa mkpanaka gị n'oge na-adịghị anya, wee pịa "OK" imechi windo.
N'otu oge ahụ, a ga-egosipụta ọganihu nke ntinye ngwa ahụ na ákwà mgbochi nke smartphone ahụ, na mgbe ọ gachara, a ga-egosipụta ọkwa kwekọrọ na ya.
Ụzọ dị mkpirikpi iji malite onye ozi ahụ na-egosi na ihuenyo ihuenyo na nchịkọta nhọrọ.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ngwaọrụ a na-arụ ọrụ telivishọn ugbu a na-apụ na Intanet, usoro ahụ ga-amalite naanị mgbe ejiri ya na netwọk.
The button na Play Store na ebe nrụọrụ weebụ ga-agbanwe na "Arụnyere".
Nwepụta onye ahịa nke Telegram arụnyere, banye na ya ma mee nhazi mbụ dị ka akọwapụtara ya ma gosipụta nzọụkwụ nke 5-10 nke usoro mbụ nke isiokwu a.
Nke a nke ngwa ngwa ekwentị na gam akporo arụ ọrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu algorithm dị ka anyị tụlere na akụkụ mbụ nke isiokwu ahụ. Nanị ihe dị iche bụ na na nke a, omume niile na-eme site na ihe nchọgharị na PC, ọ ga-abụkwa na ọ ga-adịrị onye ọzọ mma. Anyị na-atụgharị uche na onye ọzọ, nhọrọ kachasị elu.
Usoro 3: faịlụ APK
Ná mmalite nke usoro mbụ, anyị kwuru na Ụlọọrụ Play bụ ihe arụnyere na ọtụtụ ngwaọrụ Android, ma na ụfọdụ ngwaọrụ ọ ka na-efu. Nke a ga-ekwe omume, ma ọ dịkarịa ala na ikpe abụọ - a na-arụ ọrụ os na smartphone n'enweghị ọrụ Google ma ọ bụ na-elekwasị anya na ahịa na China, ebe a na-ejighị ọrụ ndị a. Ịnwere ike ịwụnye Market Play na ngwaọrụ nke ụdị mbụ, ma ọ bụghị na nke abụọ, ị ga-ebu ụzọ mee ka ha gbanwee, nke a naghị enwe ike mgbe niile. Anyị agaghị atụle ebe a nhọrọ nke ịbanye na ngwanrọ software, ebe ọ bụ na nke a bụ ngalaba dị iche na weebụsaịtị anyị.
Ịwụnye ọrụ Google na ama ama ọfụma
Ngwaọrụ ngwa ngwa arụmọrụ sitere na ndị nrụpụta dị iche iche
Ịnwere ike iwunye Telegram na ngwaọrụ na-enweghị Google Play Market site na iji ngwa ngwa nwụnye APK. Chọpụta onwe gị site na iji nyocha nchọgharị, ma ọ bụ naanị soro njikọ nke anyị nyere.
Rịba ama: A na-eme usoro ndị a site na smartphone. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ibudata faịlụ APK na kọmputa gị na mbụ, wee wega ya na ebe nchekwa nke ngwaọrụ mkpanaka site na iji ntụziaka anyị.
Download ngwa iji wụnye Telegram
Isoro njikọ ahụ dị n'elu, pịgharịa gaa na ibe ahụ iji gbochie "Ntugharị niile"ebe edere nsụgharị nke faịlụ APK maka ịwụnye Telegram. Anyị na-atụ aro ịhọrọ freshest, ya bụ, nke mbụ n'ime ndepụta ahụ. Iji mee nke a, pịa akụ ala ahụ dị n'aka nri nke aha ngwa ahụ.
Peeji na-esote wee gbadaa wee pịa bọtịnụ ahụ "Lee Ngwa APK". Na-esote, họrọ ihe ntinye nhọrọ nke kwekọrọ na ụlọ ọrụ nke ama gị.
Rịba ama: Iji chọpụta nke faịlụ dị mma maka ngwaọrụ gị, lelee nkọwa ya na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ jiri njikọ ahụ "kemiri Ajụjụ"dị na nkọwa n'elu okpokoro na nsụgharị dịnụ.
Gaa na mbipụta nke Telegram peeji nke, gbadaa ala, ebe ịchọta ma pịa bọtịnụ ahụ "Download ngwa".
Ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị nyere ikikere ibudata faịlụ ahụ, kpatụ "Na-esote" na windo popup na mgbe ahụ "Kwe ka". Na windo na ngosi na faịlụ ebudatara nwere ike imerụ ngwaọrụ gị, pịa "OK" ma chere maka usoro iji mezue.
Mgbe okirikiri nkeji ole na ole, ọkwa nke nbudata ngwa ngwa nke ngwa maka ngwa ekwentị ga-apụta na ihe nchọgharị na ihe mgbochi eji eme ihe, a ga-ahụ faịlụ ahụ na folda ahụ "Downloads".
Iji malite nrụnye, pịa faịlụ ahụ. Ọ bụrụ na etinyeghị ngwa sitere na isi mmalite amachibidoro na ekwentị gị, ọkwa ga-apụta.
Pịa na labeelu "Ntọala" ga-emegharị gị na mpaghara kwesịrị ekwesị nke sistemụ. Bugharịa mgbanwe ahụ na-abụghị ihe ahụ na ọnọdụ nọ n'ọrụ. "Kwe ka nwụnye site na isi iyi a", wee laghachi na faịlụ apk ma weghachite ya ọzọ.
Kpatụ akwụkwọ ozi "Wụnye" ma chere maka usoro echichi Telegram.
Ugbu a i nwere ike "Meghee" ngwa ngwa, banye na ya ma malite ikwurịta okwu. Otu esi eme nke a, anyi kwuru na paragraf nke 5-10 nke usoro mbu.
Usoro a bụ ihe kachasị ike niile a tụlere n'isiokwu a. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ndị ahụ mgbe enweghị ọrụ Google na ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ gaghị ekwe omume iji wụnye Telegram - ọ ka na-eji APK.
Anyị nyochachara n'ụzọ zuru ezu ụzọ atọ dịgasị iche iche nke wụnye ozi igwefoto mara mma na smartphones na mbadamba na gam akporo os. Abụọ nke abụọ bụ ndị isi na nke kachasị mfe nghọta, Otú ọ dị, n'ọnọdụ ebe ọ na-enweghị ụlọ ahịa ngwa ngwa Google na ngwaọrụ mkpanaka, onye ga-achọ ihe ndị ọzọ na-enweghị ike ime - iji faịlụ APK. Anyị na-atụ anya na ihe a bara uru nye gị ma nye aka ịchọta ezigbo ngwọta maka nsogbu dị ugbu a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Nhazi 2019